पाकिस्तानी प्रमभन्दा श्रीमती धनी, इमरान खान चार बाख्राका मालिक, श्रीमतीभन्दा गरिब ! - Birgunj Sanjalपाकिस्तानी प्रमभन्दा श्रीमती धनी, इमरान खान चार बाख्राका मालिक, श्रीमतीभन्दा गरिब ! - Birgunj Sanjalपाकिस्तानी प्रमभन्दा श्रीमती धनी, इमरान खान चार बाख्राका मालिक, श्रीमतीभन्दा गरिब ! - Birgunj Sanjal
पाकिस्तानी प्रमभन्दा श्रीमती धनी, इमरान खान चार बाख्राका मालिक, श्रीमतीभन्दा गरिब !
२ असार २०७९, बिहीबार १७:५५
वीरगंज । दुई जोईका खसम पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ र पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान आफ्ना श्रीमतीभन्दा गरिब भएको पाइएको छ ।निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको सम्पत्ति विवरणानुसार प्रधानमन्त्री शरीफ र उनका पूर्ववर्ती खानका पत्नीसँग आफ्ना पतिभन्दा अधिक सम्पत्ति रहेको पाइएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानसँग दुई लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ पर्ने चारवटा बाख्रा छन् । अंशबन्डामा प्राप्त उनीसँग ६ किसिमका सम्पत्ति छन् । पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई)का अध्यक्ष खानसँग न त गाडी छ न देश बाहिर सम्पत्ति नै ।
उनले कतै लगानी गरेका छैनन् ।खानसँग विदेशी मुद्रा खातामा तीन लाख २९ हजार १९६ अमेरिकी डलर, ५१८ स्टर्लिङ पाउन्ड र ६ करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ छ । खानकी श्रीमती बुशरा बीबीको चार प्रकारका अचल सम्पत्तिसहित कुल सम्पत्ति १४ करोड २१ पाकिस्तानी रुपैयाँको जायजेथा छ ।